Umshini Wokushisa Wensimbi Ephakeme We-Frequency High
Ikhaya / Izicelo / Ukushisa Ukushisa / Induction Steel Wire Tempering
Isigaba: Ukushisa Ukushisa Tags: thenga i-heater tempering heater, induction ukushisa okushisa, ukukhishwa kwe-induction, i-heater tempering heater, inqubo yokungeniswa ngaphakathi, ukufakwa kwe-induction surface, steel wire tempering, ukufutheka komhlaba, heater ebusweni tempering, ukuthukuthela, imishini yokungenisa ngaphakathi, inqubo tempering, ukungeniswa kwentambo
Induction Steel Wire Tempering Procee Isicelo
Induction tempering inqubo yokufudumeza elungiselela izakhiwo ezinjengobulukhuni kanye nokuqina kokusebenza ezindaweni esezenziwe zaba lukhuni.
Siqinisekisa ikhwalithi ephezulu, ukujika okusheshayo, ukuhanjiswa kwamakhasimende okuhle kakhulu, nezintengo zokuncintisana.
I-HLQ ungumholi embonini yokwelapha ukushisa okufakelwayo enikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zokwelapha ukushisa, kufaka phakathi ukufakwa kwomoya, eChina. Ukushisa kwe-induction kuyinqubo yokwelapha ukushisa evame ukwenziwa ngemuva kokuthi inqubo yokuqothulwa kwe-induction isiqedile. Kwenziwa ezingeni lokushisa eliphansi kunenqubo yokwenza lukhuni lokungeniswa ukuze kufinyelelwe ebangeni lobulukhuni obufunayo noma ukwengeza ukuqina engxenyeni ngokwandisa i-ductility. Induction tempering yensimbi uqobo yenziwa ngamaza aphansi ukukhiqiza imiphumela ngemizuzwana efana nezinhlelo zokusebenza zesithando somlilo esivame ukuthatha amahora.
Ukushisa kwe-induction kusebenza kunqubo eqhubekayo yokushisa lapho isitoko socingo sondliwa khona ngokusebenzisa ikhoyili yokungeniswa ngejubane lokukhiqiza.
Material: Intambo yensimbi engu-3mm kuye ku-12mm ubukhulu
Ukushisa: I-1922 ºF (1050 ºC)
Ukuvama: 90 kHz
Izisetshenziswa Zokushisa Zokungenisa: I-DW-UHF-60 kW, i-100 kHz ukufakwa kokushisa uhlelo, ifakwe ikhanda lokusebenza elikude eliqukethe ama-capacitors ayi-1.0 μF ayisishiyagalombili engqikithi ye-2 μF
- Amakhoyili amathathu wokushisa wokungeniswa aklanyelwe futhi athuthukiswa ngqo kulolu hlelo lokusebenza ukumboza ububanzi bezintambo
Inqubo Ye-Induction Tempering:
Isitoko socingo sondliwa ngekhoyili yama-helical engaphenduki engamashumi amane ngesilinganiso samamitha ayi-6 / iminithi, ifinyelela izinga lokushisa olifunayo ukwenza inqubo yokushisa. Kusetshenziswa ikhoyili ye-helical engu-20 efanayo kububanzi obukhulu bocingo
kudinga ukunakekelwa kwemigqa engu-6 yesitoko esithandweni somlilo oshisayo ngokudlulisela ukushisa okudumazayo ezintanjeni zobubanzi obuncane. Ukungeniswa kudinga amandla angaphansi kuka-50% futhi kunciphisa umugqa wokukhiqiza ngo-90%
- Ukushisa ngqo ocingweni, ukonga amandla nesikhathi
- Ukuhlanganiswa okulula emgqeni wokukhiqiza, ukwenza ngcono ukungena
- ngisho nokusatshalaliswa kokushisa ngaphakathi kocingo
Kungani usebenzise ukufakwa kwe-induction?
Inqubo yethu yokungeniswa ngaphakathi ikhiqiza imiphumela ngokushesha. Ukushisa kwezinsimbi eziqinile kungumsebenzi wesikhathi nesikhathi sokushisa. I-induction tempering isebenzisa izikhathi ezimfushane zokushisa (imvamisa imizuzwana kuphela) kanye nokushisa okuphezulu ukukhiqiza imiphumela elingana nokwelashwa kwesithando somlilo esivame ukudinga amahora. Ukushisa kwe-induction kungenziwa kuzo zonke izinto eziqinisiwe. Umphumela uba yingxenye enobulukhuni obukhuphukile, i-ductility namandla omthelela.
Inzuzo enkulu ye- ukukhishwa kwe-induction isivinini. Ukungeniswa kungabamba umsebenzi wokusebenza ngemizuzu, kwesinye isikhathi noma imizuzwana. Isithando somlilo ngokuvamile sithatha amahora. Futhi, njengoba ukufakwa kwe-induction kuphelele ekuhlanganisweni kwe-inline, kunciphisa inani lezinto kule nqubo. Ukungeniswa kwe-induction kusiza ukulawulwa kwekhwalithi kokusebenza ngakunye. Iziteshi zomoya wokungenisa ezihlanganisiwe futhi zigcina isikhala sendawo ebalulekile.